Windows Black XP Sp3နှင့် Cannon Scanner Error
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Hardware Knowledge » Windows Black XP Sp3နှင့် Cannon Scanner Error
1 Windows Black XP Sp3နှင့် Cannon Scanner Error on 13th October 2009, 9:56 pm
တစ်နှစ်တုန်းကပေါ့..ကျွန်နော့စက်မှာ Windows Xp Service Pack2တင်ထားပြီးသုံးတယ်..ကြာတော့လည်း
ငြီးငွေ့လာတယ်..ဒါနဲ့ Windows Black XP Pack3ပြောင်းတင်တယ်လိုက်တယ်..
စက်ထဲက အရေးကြီးတဲ့ဖိုင်ကို Backup လုပ်ပြီးရင် Black Xp OS တင် Driver တွေတင်..
ပြီးငြိမ့်..အဲမှာတင်ခက်တော့တာဘဲ Scanner က preview ကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး..
ဒါနဲ့ Device manager မှာ ၀င်ကြည့်တယ် ..ဘာ Error မှ မတွေ့ဘူး.. Driver ကို Uninstall လုပ် လိုက် ပြန်တင်လိုက်နဲ့..
USB ကြောင့်လားဆိုပြီး usb ကြိုးလှဲတယ်..မထူးဘူး..နောက်ဆုံးတော့ OS ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပြီး
OS အဟောင်းကိုဘဲ ပြန်တင်လိုက်တော့ .
Last edited by rs on 14th October 2009, 7:49 am; edited 1 time in total
2 Re: Windows Black XP Sp3နှင့် Cannon Scanner Error on 14th October 2009, 7:39 am
မနေ့ညက..ပို့်စ်ရေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်..ဟုတ်ပြီ ဘာကိုရေးမှာလဲ..စဉ်းစားရင်း Software Error ပို့စ် မရှိလို့ ကိုယ်တွေ့ OS နဲ့ Software Error ရေးတင်လိုက်မယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်..( ပို့စ်မတင် ဖူးတော့ လိုရာ ဆွဲမရေးတတ်) လို့ ဖြစ်ပုံကိုသာ ရးချလိုက်တယ်.. ပို့စ်လည်း ရေးပြီးတင်လိုက်တော့ သိကြတဲ့ အတိုင်း ကွန်နက်ရှင်ကျသွားတယ်.. ဒါနဲ့အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့
Scanner က အိုခေဖြစ်နေတယ်.
ဒါနဲ့ OS ကိုအဟောင်းကိုဘဲသုံးလိုက်ရတယ်..
ကျွနုပ်မသိသော အခြား Error ကြောင့်လည်းဖြစ်နိူင်သည်။။
Error ကိုဖြေရှင်းပုံ သိခဲ့လျှင်လည်း ပွင့်လင်းစွာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိူင်သည်။
Canon ( CanoScan LiDE 25 ) အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
3 Re: Windows Black XP Sp3နှင့် Cannon Scanner Error on 14th October 2009, 4:14 pm
Black XP က အသစ်အဆန်းလေးတွေ Virtual effect လေးတွေမိုက်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ ..........
ဒါပေမယ့်ထင်မှတ်မထားတဲ့ Error လေးတွေပေးတတ်တယ် [You must be registered and logged in to see this image.] ......black xp 17 တုန်းက လည်း logon screen မပေါ်တာတွေဖြစ်ပါတယ်....ဒါကိုတော့ control userpasswords2 ရိုက်ပြီးဖြေရှင်းခဲ့ဖူးတယ်.....ဒါပေမယ့်တစ်ချို့Game တွေ တစ်ချို့Application တွေနဲ့ အစဉ်မပြေတာတွေလည်းကြုံခဲ့ရတယ်ဗျ........နောက်တစ်ခုစိုးတာကတော့ window repair လုပ်လို့ မရတာပဲ ဒါကြောင့်ရိုးရိုးလေးပဲသုံးပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်.....
4 Re: Windows Black XP Sp3နှင့် Cannon Scanner Error